Goobta keliya ee ay maamusho dowladda Yeman oo ay cabsi soo food saartay - BBC News Somali
Goobta keliya ee ay maamusho dowladda Yeman oo ay cabsi soo food saartay
20 Maarso 2021
Qaramada Midoobay ayaa labada qoloba ugu baaqday, inay xabbad joojin sameeyaan, coronaha aawadii.
Sucuudiga ayaa sheegay in xuladafa uu hogaamiyo ay weerarro cirka ah ku qaadeen goobo dalka Yemen ka mid ah si ay taakulo u siiyaan ciidamada dawladda taageersan oo isku deyeyey in ay dib u riixaan fallaago ku soo siqday gobolka Ma'rib oo ah goobta keliya ee ciidamada xukuumadda Yemen ay gacanta kaga hayaan woqooyiga dalkaas.
Sidoo kale magaaladaasi waa xarunta gobolkaas oo saliidda qaniga ku ah. Wakaaladda wararka dawladda ee Sucuudiga ayaa sheegtay in weerarradaa lagu burburiyey kaareyaal iyo saanad kale oo milateri oo ay lahaayeen Xuutiyiinta ay Iran taageerto, khasaare laxaad leh na la gaadhsiiyey.
Todobaadkan horaantiisii ayaa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay cambaareeyey dagaalka ka socda Ma'rib waxaanu sheegay in hal milyan oo qof oo halkaa ku barakay halis ku jiraan.
Xulufada uu hogaamiyo Sacuudiga ayaa wajahaaya dhaleeceyn ku aaddan in shacab ay ku laayeen duqeymaha diyaaradaha ee ay ka wadaan dalkaasi Yeman.
Khubarada hay'dda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa waxay sheegeen xulafada Sacuudigu uu hoggaamiyo iney Yemen ka geysteen dambiyo dagaal, hay'adaha bani aadaminimada ka shaqeeyana waxay sheegeen xulafada dagaalka ay ka wadaan Yemen iney sababtay 14 milyan oo qof oo Yemeni ah iney macluul la ildarnaadaan.
Mareykanka oo Sacuudiga ku cadaadinayo inuu waafaqo xabbad joojinta Yemen
Qaramada Midoobay oo kormeereysa dekedda Hudeidah
Yemen waxaa ka socday dagaal tan iyo sannadkii 2015, markaas oo Xuutiyiintu ay ku qasbeen madaxweyne Cabdulrabah Mansuur Haadi iyo golahiisa wasiirrada in ay isaga cararaan magaalada caasimadda ah ee Sanca. Sacuudiga ayaa tageera madaxweyne Haadi, waxayna hoggaamiyaan xulafo gobolka ah oo weerarro dhanka cirka ah ku qaada jabhadaha.
Xigashada Sawirka, Routers
Sacuudiga ayaa la dagaalamaya mucaaradka Xuutiga ee Yemen
Xulafada ayaa weerarro badan qaada waxayna qarka u saaran yihiin in ay maalin walba weerro dhanka cirka ah gaystaan, dhanka kalana Xuutiyiintu waxay badanaa gantaalo ku garaacaan Sacuudi Carabiya.
Dagaalka sokeeye ee Yemen ayaa horseeday masiibadii ugu darnayd ee banii'aadminimo ee adduunka, in kabadan 80% bulshada halkaas ku nool oo tiro ahaan noqonaysa in ka badan 24 milyan ayaa u baahan caawimaad banii'adminimo ama magangalyo, dadkas waxaa ka mid ah 10 milyan oo ruux oo noloshoodu ku tiirsan tahay gargaarka.
In kabadan 70,000 oo ruux ayaa la rumaysan yahay in ay dagaalka ku dhinteen tan iyo sannadkii 2016, sida ay qiyaastay Qaramada Midoobay.
Goobihii caafimaadka ayaa intooda badan ku burburay duqaymaha
Nin ciidanka Ruushka uga badbaaday inuu meyd iska dhigay
TOOS Nin 17 sano Talyaaniga ugu xirnaa dambi uusan gelin oo maanta Muqdisho lagu dilay
Talooyin muhiim u ah ee qofka xajinaya
'Uhuru Kenyatta intaan madaxtooyada ugu tagay ayaan dharbaaxi rabay'
Kumuu ahaa mas'uulka jaamacadeed ee telefoon dartiis loogu dilay Muqdisho?
Raysul wasaaraha Ingiriiska oo wajahaya xaalad adag oo siyaasadeed